छोरीको ह’नि’मु’नमा संगै गएकी आमाले ज्वाई टि’पेर हि’डिन् – AB Sansar
छोरीको ह’नि’मु’नमा संगै गएकी आमाले ज्वाई टि’पेर हि’डिन्
October 9, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on छोरीको ह’नि’मु’नमा संगै गएकी आमाले ज्वाई टि’पेर हि’डिन्
छोरीको ह’नि’मु’नमा संगै गएकी आमाले ज्वाई टि’पेर हिडेपछि छोरीको हालत कस्तो भयो होला ? यो दुनियामा कहिलेकाहीँ यस्तो अ’च’म्मको घ’टना पनि हुन्छन् जसले मानिसलाई आश्चर्यमा पार्छ । एउटी आमाले आफ्नी छोरीमाथि यस्तो गर्न पनि सक्छिन् होला भन्ने सोच्न गाह्रो हुन्छ । आफ्नै ज्वाईसंग पो’इल गएर छोरीलाई धो’का दिने आमा पनि यो संसारमा छन् ।
बेलायतको लण्डनमा भएको यस्तो घ’टनाले विश्वको ध्यान तानेको छ ।एकजना आमाले आफ्नै छोरीको श्रीमानलाई खो’सेर आफुले विवाह गरेकी छन् । ३४ वर्षकी महिलाले आफुमाथि आफ्नी आमाले १५ वर्षअघि गरेको यस्तो धो’केबाजीपूर्ण घ’टनावारे अहिले बताएकी हुन् । लण्डनस्थित टिवकेनहममा बस्ने लोरेन वालको बिहे भएको २ महिनामा नै आमाले त्यस्तो गरेकी थिइन् ।
विवाह भएको दुई महिनामै एक दिन उनका पति हराए । आफ्ना सम्पर्कविहीन भएका पतिको खोजी गर्ने क्रममा उनले आफन्तबाट जानकारी पाइन् कि उनका पति त आफ्नै सासुआमा अर्थात् उनकी आमासँग बस्न थालेछन् ।आफ्नै पत्नीकी आमा अर्थात् सासुआमासँग बिहे गर्ने ती पुरुषको नाम पाउल हो । लोरेन र पाउलबीच सन् २००४ मा बिहे भएको थियो ।
लोरेनकी आमा जूलीले छोरीको बिहेमा लाखौँ खर्च गरेर भव्य पार्टी समेत दिएकी थिइन् । छोरी ज्वाई निकै खुसी थिए । तर यस्तो अवस्था कसरी आयो भन्ने छोरीले बुझ्नै सकिनन् । विवाह पछि आफ्नो हनिमुनमा आफ्नी आमालाई पनि सँगै लगेकी थिइन् । आमालाई हनिमुनमा सँगै लग्दा उनी आफ्नै ज्वाइँसँग सल्किएलिन् भन्ने कुरा उनले कल्पना पनि गरेकी थिइन् । तर भयो त्यस्तै ।
हनिमुनबाट फर्केको केही समयमै पाउल घरबाट निस्के र सासुआमा जूलीसँगै बस्न थालेपछि यस्तो घटना बाहिर आएको हो । आमाको त्यस्तो ब्यवहारले छोरी निकै दुखी भइन् । केही समयपछि उनकी आमाले बच्चा पनि जन्माइन् । केही वर्षको लिभिङ टुगेदरपछि ती सासु ज्वाइँबीच बिहे भयो । आफ्नै लोग्ने र आमाबीचको बिहेमा लोरेन पनि सहभागी भएकी थिइन् ।
आफ्नो लोग्नेले आफ्नी आमासँग बिहे गरेको त्यो दृश्य लोरेनका लागि जीवनकै सबैभन्दा अप्रिय दृश्य बन्यो । आफुले कहिल्यैपनि आफ्नी धोकेबाज आमा र पूर्व लोग्नेलाई माफी नदिने उनले बताएकी छन् ।
नेपालमा भुसको आगो जसरी फैलिदै कोरोना ! आज एकैदिन देखिए यतिधेरै संक्रमित !
को’रोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मदकृष्ण लेख्छन्ः ‘ह’ लाई समातेपछि ‘म’ लाई मात्र के बाँकी राख्ला र…
भजनकीर्तन भइरहेका बेला माइकमा करेन्ट, दुई जनाको मृ,त्यु
August 11, 2021 Ab-संसार
धादिङको बैरेनीमा बस र भारतीय नम्बर ,प्लेटको ट्रक ठोक्किँदा २७ वर्षीया रेनुकाको मृ:त्यु !!
२ दिन भित्र तपाईं’को काम” बन्नेछ ,बिल्कुलै बेवास्ता नगरि देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी, सेयर गर्नुहोला अबस्य पढेर भगवानको दर्शन गरौ !